Tattoo Grips ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ - China Tattoo Grips Factory
တစ်ခါသုံးဆီလီကွန်ချိန်ညှိနိုင်သောတက်တူးထိုးသည့်အရာတစ်ခု (25pcs / box)
ပစ္စည်း - ပလတ်စတစ် + ဆီလီကွန်အရောင် ၄ ရောင်၊ အနက်၊ အနီရောင်၊ မီးခိုးရောင်၊ လိမ္မော်ရောင်ထုတ်လုပ်မှုရက် - သက်တမ်း - 2020.3-2025.3 ကုန်ပစ္စည်းအလေးချိန် - ၃၇.၁ ဂ (ထုပ်ပိုးမှုအပါအ ၀ င်) အထုပ် - ဖွဲ့စည်းခြင်း - အဆင့်မြင့်သောблистерထုပ်ပိုးခြင်း၊ လှံတံနှင့်ပိုးသတ်လက်မှတ်ကဒ်ထုပ်ပိုးအရွယ်: 109mm * 31mm ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား: 81.4mm * 31mm အပ်ဘားအရှည်: 89.5mm အားသာချက်: 1. ချိန်ညှိဖွဲ့စည်းပုံ, လက်ကိုင်အပ်၏အရှည်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်; 2. ပျော့ပျောင်းသော silicone လက်ကိုင်အဖုံး၊
လက်ကား Tattoo Supplies Aluminum Tattoo Handle ၃၂ မီလီမီတာ Adjustable Cartridge Tattoo Grip အကြမ်းခံ၊ လွယ်ကူစွာလည်ပတ်နိုင်ခြင်း၊ အပ်ချုပ်ညှိနိုင်သည့်အပ်များအလျား၊ ကုန်ပစ္စည်းအမည်: Tattoo Cartridge Grip အသားတင်အလေးချိန် - ၈၄.၅ ဂရမ်အလေးချိန် - ၁၄၈ ဂရမ်အရွယ် - ၈၁.၈ မီလီမီတာ * ၃၂ မီလီမီတာထုပ်ပိုးခြင်း - ချုပ်ကိုင်သည့်သေတ္တာ + ၃ သံမဏိပါးလွှာသောချောင်းများ (၈၅-၉၀-၉၅ မီလီမီတာ) အရောင်: ၃ ရောင်၊ အနက်ရောင်၊ အနီရောင်၊ ငွေရောင်ရာထူးအမည်: ခန္ဓာကိုယ်တက်တူးအနုပညာ Parameter: ၁။ ပစ္စည်း - အလူမီနီယမ်သတ္တုစပ် ၂။ လုပ်ငန်းစဉ် - ခုံ ၃ ။
38mm လူမီနီယံ Tattoo ကျည်တောင့်ချုပ်ကိုင်
အသားတင်အလေးချိန်: 114.5g စုစုပေါင်းအလေးချိန်: 189.5g အရွယ်အစား: 80mm * 39mm ထုပ်ပိုး: ချုပ်ကိုင် box ကို + သံမဏိပါးလွှာသောချောင်းတွေ (85-90-95mm) အရောင်:2အရောင်များအနက်ရောင် - ငွေအားသာချက်: 1. သံမဏိတိုင်မှလွဲ။ , ကျန်အပိုင်းများကိုလူမီနီယမ်အလွိုင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအတွင်းပိုင်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများသည်အလူမီနီယမ်အလွိုင်းများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်မြင့်မားသောအပူချိန်အားဖြင့်တိုက်ရိုက်ပိုးသတ်နိုင်သည်၊ သန့်ရှင်းပြီးတစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှု၊ ၂။ ဖြုတ်တပ်နိုင်သောတည်ဆောက်ပုံ၊ တိကျမှုမြင့်မားသော elastic positioning သံမဏိဘောလုံးကိုပါ ၀ င်သည်။
30mm Gradient အရောင် Adjustable Tattoo Cartridge Grip
အသားတင်အလေးချိန်: 64.5g စုစုပေါင်းအလေးချိန်: 134.5g အရွယ်အစား: 80.5mm * 30mm ထုပ်ပိုး: လက်ကိုင်သေတ္တာ +3သံမဏိပါးလွှာသောချောင်းတွေ (85-90-95mm) အရောင်: အရောင်နှစ်ရောင်အနက်ရောင် - ပန်းရောင်အပြာ Parameters: 1. ပစ္စည်း: လူမီနီယံ အလွိုင်း ၂။ လုပ်ငန်းစဉ် - CNC ၏တိကျသောထွင်းထုခြင်း - ၃။ ကဒ်ပင်အရွယ်အစား - Cheyenne စံ ၄။ ဖွဲ့စည်းပုံ - အပ်၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုညှိရန်သံမဏိဘောလုံးပါ ၀ င်သည်။ ၅ ။ အရောင် - အရောင်နှစ်မျိုးပါအကျိုးကျေးဇူး - ၁။ စီဒီစီမှလက်ရာလက်ရာ၊ အဆင့်မြင့်၊ 2,304 ထူသောသံမဏိပိုက်၊
လုပ်ငန်းစဉ် - CNC ပေါင်းစပ်ထားသည့်ဒဏ်ခံပစ္စည်းများ - သံမဏိ ၃၁၆ သံမဏိအရောင် - သံမဏိသဘာဝအရောင် - ရောင်စုံ - အနက်ရောင် - ကင်မရာ - တောက်ပသောအရောင်အချင်း - ၃၂mm အရွယ် - ၈၀.၄ မီလီမီတာ * ၃၂ မီလီမီတာအလေးချိန် - အသားတင်အလေးချိန် ၂၁၅ ဂရမ်စုစုပေါင်းအလေးချိန် - ၂၈၈ ဂဂအားသာချက် - 1. တောက်ပသောအသွင်အပြင်၊ ပုံမှန် အရွယ်အစား, မျိုးစုံအရောင်များ, ပြည်ပမှာလူကြိုက်များစတိုင်များ; ၂။ စုစုပေါင်းသံမဏိပစ္စည်း ၃၁၆ လုံး၊ အလေးချိန်သည်လုံလောက်ပြီးတက်တူးဝါယာကြိုးသည်ပိုမိုလွယ်ကူပြီးညင်ညင်သာသာတွန်းပါ။ ၃။ အပြည့်အဝဖြုတ်တပ်ထားသောဖွဲ့စည်းပုံသည်တစ်ခုလုံးကိုတိုက်ရိုက်ပိုးသတ်နိုင်သည်။
Universal တက်တူးစက်၏ရိုးရှင်းသော Tattoo Needle ဆေးကြောရန်အတွက်ဆေးကြောရန်လွယ်ကူပြီးအပြည့်အဝအလိုအလျောက်မှတ်သားနိုင်မှုလွယ်ကူသော၊ ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်ကိုသုံးရန်သင့်အတွက်အဆင်ပြေပါသည်။ Professional တက်တူးထိုးစက်ချုပ်ကိုင်ထားသည့်စက်ကိုကွိုင်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ အမည် - Aluminum Tattoo Grip Material : အလူမီနီယမ်အချင်း: 25MM, 30MM, 35MM အရောင် - အနက်ရောင်၊ အနီရောင်၊ အပြာရောင်နှင့်အစိမ်းရောင်အလေးချိန် - ၀.၁ ကီလိုဂရမ် / pc UPS, DHL, Fedex သည်အမြန်အမြန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ခသည်အခြားအခများထက်မြင့်မားသည်။
ပျော့ပျောင်းသောအနီရောင်ဆံပင်တိုရှင်း Tattoo Tube နှင့်အတူ 25mm Disposable Tattoo ချုပ်ကိုင်
အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းရရှိနိုင်သောဆုပ်ကိုင်နိုင်သည့်အရွယ်အစား - Round Tips (RT): 3RT, 5RT, 7RT, 9RT, 11RT, 14RT (Rounder liner နှင့် Round Shader needles အတွက်ကောင်းသည်) Flats Tips (FT) - 5FT, 7FT, 9FT, 11FT, 13FT , 15FT (Flat and Magnum ဆေးထိုးအပ်များအတွက်ကောင်းသည်) Diamond Tips (DT): 3DT, 5DT, 7DT, 9DT, 11DT, 14DT, (Rounder liner နှင့် Round Shader needles များအတွက်ကောင်းမွန်သည်) ပြွန်များသည်တစ်မျိုးတည်းသာအသုံးပြုသည်။ scrubbing သို့မဟုတ် autoclaving မလိုအပ်ပါ။ နူးညံ့ပြီးစေးမပါသည့်ရော်ဘာချုပ်ကိုင်ထားမှုများသည်တုန်ခါမှုကိုထိရောက်စွာကာကွယ်ပေးပြီးလက်အားပင်ပန်းမှုကိုကာကွယ်ပေးသည်။
အနက်ရောင်ဆီလီကွန်ဖယ်ရှားနိုင်သောတက်တူးကိုင်တွယ်မှုနှင့်ရှင်းလင်းသောအစွန်အဖျားအရွယ်အစား / ထုပ်ပိုးမှု 16mm 40pcs / box 19mm 30pcs / box 25mm 20pcs / box 30mm 15pcs / box အရွယ်အစား 3R-5R-7R-9R-11R-13R-15R-18R 5F-7F-9F-11F -13F-15F 3D-5D-7D-9D-11D-14D-18D ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်: (၁) အလုပ်သစ်တွင် Tattoo Disposable Tubes အသစ်သည်ရှုပ်ထွေးသော၊ အရောင်ကျသော၊ ကောက်ကျစ်သောပြွန်ဒီဇိုင်းပါရှိသည်။ ။ (2) .tattoo တစ်ခါသုံးပြွန်အသစ်နှင့်အစွန်အဖျား, တိကျသောအစွန်အဖျားအရွယ်အစားအနုပညာရှင်များနူးညံ့သိမ်မွေ့သောအနုပညာလက်ရာများကိုပေးသည်။ (3) .High အရည်အသွေး T က ...
ရော်ဘာမြုံတစ်ခါသုံး Tattoo ချုပ်ကိုင် Tattoo Tube
Tattoo G503A Sterilized 1″ 25mm ရော်ဘာနူးညံ့သောအနက်ရောင်ချုပ်ကိုင်မှုနှင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှည်လျားသော Tattoo Tubes ကုန်ပစ္စည်းအမည်: Tattoo Tube အထုပ်: 20pcs / box ကိုအချင်း: 1″ (25mm) ပစ္စည်း: ABS ပြွန်နှင့်အတူစလစ်ဆီဂျယ် (ပလပ်စတစ်မဟုတ်) ရရှိနိုင် အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း grip tip အရွယ်အစား (RT) 3R, 5R, 7R, 9R, 11R, 13R, 14R, 15R, 18R (Rounder liner နှင့် Round Shader needles အတွက်ကောင်းပါတယ်) Flats Tips (FT) 5F, 7F, 9F, 11F, 13F, 15F 5MF, 7MF, 9MF, 11MF, 13MF, 15MF (ပြားချပ်ချပ်နှင့် Magnum အပ်များအတွက်ကောင်းမွန်သည်) D ...
Silica Gel Black Tattoo Grips ဖြင့်ပွင့်လင်းမြင်သာသောတွန်းလှန်နိုင်သည့် Tattoo Grips 25MM
20pcs / box Silicone ABS Sterilized Tattoo Tubes ၂၅ မီလီမီတာဖယ်ရှားနိုင်သောအနက်ရောင်လက်ကိုင်အိတ်နှင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြထားသည်။ အလွယ်တကူဖယ်ထုတ်နိုင်သည့် Tattoo Tubes Grips အချင်း ၁″ ၂၅ မီလီမီတာရှိသောပစ္စည်း Anti-slip silica gel အထုပ် 20pcs / box အောက်ပါအတိုင်းရရှိနိုင်ပါသည်။ 3R-5R-7R-9R-11R-14R-18R (ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်အဝိုင်း shader အပ်များအတွက်ကောင်းသည်) အသားလွှာသိကောင်းစရာများ (FT): 5F-7F-9F-11F-13F-15F (ပြားချပ်ချပ်နှင့် Magnum အပ်များအတွက်ကောင်းသည်) စိန်အကြံပြုချက်များ (DT): 3V-5V-7V-9V-11V-14V-18V (Round liner နှင့် Rou အတွက်ကောင်းမွန်သည် ...
20PCS Premade Sterilized Disposable 25mm Tattoo Grip Tube Supply 3/5/7/9/11/13 / 15RT MT DT Pick အရွယ်အစားပတ် ၀ န်းကျင်ထုပ်ပိုး: 20 pcs / box အသွင်အပြင်: 20pcs ၏ 25pcs 25mm Grip, Diamond3Tube နောက်ဆုံးပေါ် Tattoo ဆန်းသစ်တီထွင်မှု 1″ Dia ။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆင့် 114R-111 ဗဓေလသစ်အလွှာမှပုံမှန်ရော်ဘာပြွန်များအနေဖြင့်လက်ဖြင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုနှစ်ဆအထိလျှော့ချရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၁၀၈ မီလီမီတာရှိသောပစ္စည်း: မြုံ။ စွန့်ပစ်နိုင်သော ၂၅mm၊ ။